China Backpack T-B3516 Kugadzira uye Fekitori | TIGERNU
TIGERNU yakawanda-inoshanda fashoni bhegi
Unyanzvi: Iyo saizi yekumashure yeUSB iri 31 * 19 * 45cm, imwe yakaparadzaniswa yakakomberedzwa laptop muhomwe kumashure, bata unosvika 15.6 inch laptop
Feature: ine yakavakirwa-mukati USB charger. Iyo USB yekuchaja chiteshi kunze uye USB tambo mukati. Iri bhegi reUSB rinokupa iwe iri nyore nzira yekuchaja nharembozha dzako uchifamba kana kufamba kunze.
Kudzivirirwa: iyo nyowani yakapetwa ina-zino inorwisa-kuba zipi pane huru kamuri, pamwe neayo maviri-nzira mazipi musoro wakakiiwa neyakavhara, uchigara kure nekurasikirwa nezvinhu zvako. yakavharwa pamwe chete ne zipper puller kana zvichidikanwa
Kunyaradzwa: iyo "S" yakakomberedzwa-yakasungwa zvakanaka bhanhire tambo inogona kusunungura yako yepafudzi kumanikidza uye inobvumira yakasununguka kupfeka. Human-yakatarisana neshure dhizaini dhizaini inogadzira zvimwe zviri nyore kune hwedu hwezuva nezuva hupenyu, semuenzaniso, diki zipi muhomwe & sunglass hanger pane mapfudzi tambo , yakavanzika zipi muhomwe & tambo yetambo kumashure kweshure, zvichingodaro.
Hunhu: Inogadzirwa ne300D yakasimba oxford machira pamwe nePV yeganda. Yakasarudzika mabhureki & zvishongedzo zvine yakasimba zvinhu, uye simbisa kusona & kusimbisa kune ese anotakura-anotakura zvikamu
Iri bhegi rinogona kupa yako irinani ruzivo rwekufamba neese maficha. Izvo zvakakwana kune chikoro, basa, kuenda, bhizinesi, kufamba uye zvichingodaro. Mufashoni dhizaini yemudzidzi, vakadzi, varume.
Model Nhamba T-B3516
Ruvara: Dema Grey, Grey
Saizi: L31 * W19 * H45cm
Style: Mufashoni, Zororo
Pashure: Bhegi T-B3351
Zvadaro: Bhegi T-B3585